Madaxweyne Xaaf: Dowladda Somaliya Ciidan Militari iyo Nabad S... | Universal Somali TV
Madaxweyne Xaaf: Dowladda Somaliya Ciidan Militari iyo Nabad Suggid isoo qabta ayeey iisoo dirtay waana fashilmay qorshahaas
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) ayaa sheegay Dowladda Federalka Somaliya inay u soo dirtay ciidamo Militari iyo Nabad Suggid oo isku dayay inay soo qabtaan, isaga balse ay ku fashilmeen ciidankaasi sidauu yiri.
Madaxweyne Xaaf ayaa sheegay isku dayga afgambiga ah ee lagu sameeyay inuu ka guulaystay, kadib markii Shacabka Galmudug ay muujiyeen isku duubni ku aadan inay isdifaacaan.
Wuxuu sheegay inay nasiibdaro tahay Dowladii Somaliya ee dalka la doonaayay inay ka hirgeliso nidaam Maamul inay isku dayeyso fulinta afgambi qorsheysan oo lagu carqaladeynaayo Maamul nidaam leh oo dhisan.
Dowladda Federalka Somaliya ayaa wuxuu ugu baaqay inay ka shaqeyso nagaadshaha marxaladda Siyaasadeed ee dalka, loona baahan yahay kaalin muuqata inay ka qaadato oo aysan ku mashquulin arrimo kale.
Kan-xigaDabley hubaysan oo Degmada Wadajir ku...
Kan-horeShabaab oo sheegtay weerar ka dhacay ...
39,207,016 unique visits